ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့အခါ အသံဖမ်းတဲ့အပိုင်းမှာ ပြဿနာအနည်းငယ် ရှိနေတဲ့ Pixel2နဲ့ Pixel2XL
ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ အသံတွေက ကြည်လင်ပြတ်သားမှု မရှိပဲ တဂျစ်ဂျစ် အသံတွေ၊ High Pitch Sound (ကြိမ်နှုန်းမြင့် အသံ) တွေ ပါဝင်လာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု Pixel2နဲ့ Pixel2XL ဖုန်းတွေမှာ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီပြဿနာကို အသုံးပြုတစ်ချို့ပဲ ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပြီး အချိန်တိုင်းကြီး ဖြစ်နေတာလည်း မဟုတ်ပဲ၊ ကောင်းချင်တဲ့ အချိန်ကျရင်လည်း သူ့ဟာသူ ကောင်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း Google ရဲ့ Pixel User Community Forum ထဲမှာတော့ အခုပြဿနာကို Report လုပ်ထားကြတဲ့ Post တွေနဲ့ ပြည့်နေပါတယ်။
“ကျနော့် Pixel2XL နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးတဲ့အခါ အသံ Quality က တော်တော်လေး ဆိုးရွားပါတယ်။ အသံက ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ နို့ဆီဘူးထဲမှာ ကြိမ်နှုန်းမြင့်အသံတွေ နားထောင်နေရသလိုပဲဗျ”
လို့ Pixel User Community Forum ထဲမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
Google ရဲ့ Community Manager တစ်ယောက်ကတော့
“ဒီပြဿနာက အချိန်တိုင်း ဖြစ်နေတာလားဗျ? ဒါမှမဟုတ် အသံဆူညံတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကျမှ ဖြစ်တာလား? အကယ်လို့ ဒီပြဿနာက တစ်ခါတစ်လေမှပဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Software ပိုင်းက ဖြစ်နေတာဗျ။ အမြဲတမ်းလိုလို ဖြစ်နေရင်တော့ Hardware ပိုင်းမှာ ချို့ယွင်းမှုရှိနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်”
လို့ ပြန်လည်ဖြေကြား ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Google အနေနဲ့ ဒီပြဿနာက Software ပိုင်းက ဖြစ်နေတာလား၊ Hardware ချို့ယွင်းမှုတွေ ဖြစ်နေတာလား၊ စတာတွေကို သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဒီပြဿနာက Software ပိုင်းမှာ ချို့ယွင်းချက် ရှိနေတာလို့ CNET ကို Confirm လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အခု ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အသုံးပြုနေသူတွေ အတွက်လည်း Google ဘက်က Bug Fix ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ iPhone 8 နဲ့ 8 Plus မှာလည်း အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတက်ခဲ့ဖူးပြီး Bug Fix ထုတ်ပေးလိုက်တော့လည်း ပြန်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Pixel2နဲ့ Pixel2XL အသုံးပြုနေသူတွေ အနေနဲ့ အခုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတယ် ဆိုရင်တောင် စိတ်ပူဖို့တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။
တစ်ဖက်မှာလည်း အသုံးပြုသူတစ်ချို့ဟာ အခုပြဿနာကို မကြုံတွေ့ရပဲ Android Auto က ပြဿနာတက်နေတယ်လို့ Google ကို Report လုပ်ထားကြပါသေးတယ်။ Android Auto အသုံးပြုနေသူ တစ်ဦးက
“ကျနော် အလုပ်ကနေ အသွား၊ အပြန် ကားမောင်းရင် Android Auto ကို သုံးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ နှစ်နာရီကျော်လောက်ကြာအောင် အသုံးပြုရင် ကျနော့် Pixel2XL က လုံးဝ Crash ဖြစ်သွားပါတယ်။ App ကို ပြန်ဖွင့်ချင်ရင်လည်း ဖုန်းကိုကားနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာကို ဖြုတ်ပြီး၊ ပြန်ချိတ်ဆက်ပေးမှ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဒီပြဿနာက Google Play Music နဲ့ Google Maps ဖွင့်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့ Nexus 6P မှာတော့ ဒီပြဿနာ မရှိပါဘူး”
လို့ Repot လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
Android Auto Team အနေနဲ့ ဘာကြောင့် ဒီပြဿနာ ဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတာကို စုံစမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီး၊​ ဒီပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Android Auto အသုံးပြုသူတွေကိုလည်း Email ပို့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Bug Fix ကိုလည်း အချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
Gadgets 360 CNET
Google Android Bug Report Nexus 6P Pixel2Android Oreo Pixel2XL